Fanafody trondro - hazan-dranomasina - Mahasalama ny hazan-dranomasina - BALLYA
Furanodone dia mandaitra amin'ny Mycoplasma avium, S. seimonella, ary ny typhoid murine, sns.
Nitrofurantoin dia tsy misy fofona, mangidy ary mamiratra rehefa tratry ny hazavana noho ny vovoka kristaly mamirapiratra mavo
Nitrofurazone dia fanafody miady amin'ny bakteria synthetic izay afaka mitsabo ny aretina amin'ny biby fiompy.
Furazolidone dia antibiotika nitrofuran.
Fitsapana Green Malachite
Malachite maintso dia fitambarana organika synthetic.
Chloramphenicol antibiotika dia antibiotika fiparitahan'ny bakteriaostika.
Fanafody trondro amin'ny hazan-dranomasina
Salama ny hazan-dranomasina
Sisan'ny zava-mahadomelina tafahoatra
Ny residu zava-mahadomelina be loatra no antony mivantana sy lehibe manohina ny kalitao sy ny fiarovana ny hazandranomasina ary ny fanondranana hazan-dranomasina any Sina.
Ny fandotoana lehibe ny tontolon'ny rano
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny famokarana indostrialy sy fambolena any Shina ary ny fitomboan'ny isan'ny mponina dia mihombo hatrany ny olan'ny fandotoana ny tontolo iainana, ary miharatsy hatrany koa ny tontolon'ny rano mifandraika amin'ny hazandranomasina.
Malemy ny foto-kevitra kalitao ary tsy manara-penitra ny fifaninanana amin'ny tsena
Raha jerena ny zava-misy ankehitriny dia kely ny ambaratonga ankapobeny amin'ny famokarana hazan-dranomasina sy ny fikarakarana hazan-dranomasina any Sina, kely ny haavon'ny teknika ary mbola marefo ihany ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika. Ny orinasam-pamokarana sy fanodinana sasany dia manana ambaratonga ambany fitantanana ambany kalitao sy kalitaon'ny vokatra tsy mitovy. Ny orinasa sasany dia mampiditra tsy ara-dalàna ireo zavatra voarara sy zava-mahadomelina mandritra ny fanodinana hazandranomasina mba hahazoana tombony be ary tsy miraharaha ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpanjifa.
Ny fenitra momba ny kalitaon'ny vokatra anaty rano sy ny fiarovana ary ny rafitra fanaraha-maso
Tsy mbola nametraka rafitra fenitra momba ny kalitaon'ny hazan-dranomasina sy fiarovana i Shina. Misy lesoka toy ny fitsipika tsy miova ary tsy mifanaraka mifanaraka amin'ny fenitra sasany. Misy ny tsy fisian'ny drafitra fametrahana fenitra rafitra sy rafitra. Ny ifantohan'ny fanaraha-maso hazan-dranomasina dia mbola amin'ny vokatra farany. Ity dia karazana ny fihetsika miharihary taorian'ny fitantanan-draharaha dia lavitra ny fomba fanao "fakana an-keriny avy amin'ny loharano" noraisin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Inona no atao hoe fanafody trondro
Fanafody trondro dia manondro ireo fanafody ampiasaina amin'ny jono mba hiantohana ny fitomboan'ny biby anaty rano sy zavamaniry. Noho izany, ny haben'ny fampiharana azy dia voafetra amin'ny fiompiana anaty akondro, ary ireo akora ampiasaina amin'ny fisamborana jono sy indostrian'ny fanodinana trondro dia tsy tafiditra ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana trondro.
Ny jono anaty rano maoderina dia mizara roa lehibe: trondro, makamba, trondro, sokatra, sokatra ary biby anaty rano hafa, ary karazan-javamaniry anaty rano toy ny laver, ahitra ary karazan-drano hafa. Noho izany, ny fanafody trondro dia mizara roa ihany koa: ny fanafody zavamaniry anaty rano sy ny biby anaty rano, izay azo antsoina koa hoe fanafody anaty rano.
Karazana fanafody trondro
Ny fanafody trondro matetika dia sokajiana arakaraka ny vokatry ny fanafody. Na izany aza, ny fitsaboana trondro dia sokajina amin'ny ankapobeny araka ny tanjon'ny fampiasana noho ny tsy fahampian'ny fikarohana ara-panafody.
1. Mpanova ny tontolo iainana zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ny rano anaty rano, anisan'izany ny fanovana ny toerana misy azy, ny fanovana ny kalitaon'ny rano ary ny fanovana ny toe-piainana ekolojika.
2. Famonoana otrikaina dia zava-mahadomelina ampiasaina hamonoana zavamiaina bitika (ao anatin'izany ny protozoa) anaty rano.
3. Ny fanafody antimicrobial dia manondro zava-mahadomelina izay mamono na manakana ny fiterahana sy ny fitomboan'ny zavamiaina bitika ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fitantanana am-bava na ny tsindrona.
4. Ny zava-mahadomelina famonoana bibikely sy bibikely dia manondro zava-mahadomelina izay mamono na mandroaka ny katsentsitra in vitro na in vivo, ary ny fanafody mamono invertebrata manimba ao anaty rano amin'ny alàlan'ny fandroana fanafody na fitantanana am-bava.
5. Ny fanatsarana ny metabolika sy ny fitsaboana matanjaka dia entina hilazana fanafody hanatsarana ny fatran'ny metabolisma an'ilay zavatra fiterahana, fanatsarana ny lalàm-panorenan'ny vatana, sitrana amin'ny aretina ary fampiroboroboana ny fitomboana.
6. Ny fanafody raokandro sinoa dia manondro ireo zavamaniry fanafody tsy voahodina izay ampiasaina amin'ny fisorohana sy fitsaboana ireo biby anaty rano sy zava-maniry na fanatsarana ny fahasalaman'ny zavatra mamboly, fantatra koa amin'ny hoe fanafody voajanahary.
7. Ny fanafody natolotry ny vokatra biolojika tamin'ny alàlan'ny biokimia na bioteknolojia dia matetika manana asa manokana.
8. Fanafody hafa, anisan'izany ny antioksidan, fanafody fanatoranana, mpitsabo antifungaly, synergista sns.
Vokatry ny fanafody trondro
Ny fanafody trondro dia fitaovam-piadiana lehibe ho an'ny olombelona hiadiana amin'ny biby anaty rano sy ny zava-maniry, ny bibikely ary ny bibikely, ary koa fitaovana lehibe hanatsarana ny fahasalaman'ny biby anaty sy ny zavamaniry anaty rano ary hampiroborobo ny fitomboana sy ny fampandrosoana. Ny tanjon'ny fampiharana fanafody trondro dia ny fiantohana sy fampitomboana ny vokatra azo avy amin'ny jono. Amin'ny maha-trondro trondro azy dia tsy maintsy manana ny iray amin'ireo fiasa valo manaraka izy, dia: (1) hitsaboana aretina; (2) hisorohana aretina; (3) hanafoanana sy hifehezana ny fahavalo; (4) hanatsara ny tontolon'ny fiompiana; (5) hanatsara ny fahasalaman'ny zavamananaina; (6) Manatsara ny fanoherana ny aretina ao amin'ny vatana; (7) mampiroborobo ny fitomboana; (8) fitiliana aretina.
Maninona no mijanona amin'ny hazan-dranomasina ny fanafody trondro
Ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny fiompiana hazan-dranomasina dia tsy mifanaraka amin'ny fepetra amin'ny fialantsasatra amin'ny zava-mahadomelina; fampiasana zava-mahadomelina voarara; fampiasana fanafody maharitra, be loatra ary miverimberina: fampiasana an-jambany ny fepetra tsy voamarina; fanovana tsy nahy ny tanjon'ny fitantanan-draharaha, ny làlan'ny fitantanana, ny tsy fampiasana fanafody tsy ara-dalàna ao amin'ilay toerana, sns. Io no tena mahatonga ny sisa tavela amin'ny trondro.
Ny loza ateraky ny residu fanafody trondro
Ny residues fanafody trondro dia mifandray akaiky amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Amin'ny ankapobeny, ny residu zava-mahadomelina amin'ny hazan-dranomasina dia matetika ambany dia ambany, ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsy hiteraka vokadratsy mahery vaika amin'ny vatan'olombelona, ​​ary matetika no tsy raharahiana. Na izany aza, raha mihinana moramora ny hazandranomasina avy amin'ny zava-mahadomelina ambany ianao ary manangona tsimoramora ao amin'ny vatana dia hanimba ny fahasalaman'ny vatana izany.
Vokatry ny poizina
Raha toa ka be loatra ny habetsaky ny residue voarohirohy indray mandeha, dia hisy ny fanehoan-kevitra mamaky teny sy manoratra eo anelanelany. Mazava ho azy, tsy fahita firy ny fisehoan'ny fanapoizinana mahery vaika, fa ny residu zava-mahadomelina dia mety hiteraka fatiantoka sasany amin'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana maharitra ny tadin'ny sakafo.
Ny sulfonamides, tetracyclines, quinolones, ary antibiotika glycoside sasany izay matetika ampiasaina amin'ny fiompiana hazan-dranomasina dia karazana mora tohina mahazaka. Ny tranga maivana dia mety miteraka dermatitis, urticaria, tazo sns. Amin'ny tranga goavambe dia mety hiteraka fikorontanana izany ary mety hampidi-doza mihitsy aza.
Ny famoahana ny hazan-dranomasina amin'ny zava-mahadomelina sasany, indrindra ny antibiotika, dia mety hiteraka famokarana aretina tsy mahazaka zava-mahadomelina ao amin'ny vatana, izay azo ampitaina amin'ny vatan'olombelona aorian'ny fanjifana mba hiteraka fanoherana zava-mahadomelina; ny hazan-dranomasina misy residu zava-mahadomelina dia mety hiteraka fanoherana zava-mahadomelina sasany amin'ny vatan'olombelona. Ny fipoiran'ny sorisory dia mahatohitra, izay hitondra fahasahiranana sasany amin'ny fitsaboana klinika amin'ny areti-mifindra.
Ny bakteria marobe ao amin'ny vavonin'olombelona sy ny tsinay dia mazàna rafitra mahay mifandanja. Ny residu fanafody trondro hazan-dranomasina dia mety hanakana na hamono flora mora tohina, hisy fiantraikany ary hanakorontana ny fifandanjana, hiteraka areti-mifindra endogenous; miteraka aretina ary manimba ny fahasalaman'ny olombelona.
Vokatry ny Triple
Izany dia karsinogenika, teratogenika ary mutagenika. Ny zava-mahadomelina sy ny akora simika amin'ny tontolo iainana dia mety hiteraka fiovan'ny fototarazo na ny tsy fihanaky ny chromosomal ary mety hanimba ny olombelona. Ohatra, ny agents olaquindox izay mampiroborobo ny fitomboana dia matetika ampiasaina amin'ny tariby welding, ary voamarina fa mazava ho azy ny fanapoizinana, ny genotoxis ary ny mutagenisation. Ny fampiasana maharitra dia hijanona ao amin'ny vatan'ny trondro ary mety hampidi-doza ny fahasalaman'ny olombelona. Noho izany, ny fiarovana ny olaquindox ho an'ny hazan-dranomasina dia mila tombana bebe kokoa. Malachite maintso, zava-mahadomelina fampiasa matetika amin'ny fitsaboana ny bobongolo amin'ny hazan-dranomasina, dia kanseran'ny bakteria mahery.
Vokatry ny hormonina
Ny sisan'ny zava-mahadomelina hormonina hazan-dranomasina dia mety hanakorontana ny fiasan'ny olona ara-batana, ary mety hitarika ho amin'ny fahamatorana ara-nofo haingana, ny fanilihana ny lahy sy ny vavy ary ny trangan-javatra hafa, misy fiatraikany amin'ny fitomboana sy ny fivoarana ara-dalàna. Toy ny methyl testosterone sy diethylstilbestrol ampiasaina amin'ny fanovana firaisana ara-nofo amin'ny dingana zana-ketsa; gonadotropine chorionika ho an'ny fananahana sy fampidirana biby anaty rano.
Ahoana ny fomba hisorohana ny residu fanafody trondro amin'ny hazan-dranomasina?
Ny fampiharana ny fepetra fanaraha-maso mahomby amin'ny fizotry ny fiompiana dia iray amin'ireo fomba lehibe hiantohana ny kalitao sy ny fiarovana ny hazan-dranomasina nambolena, ary izy io koa dia iray amin'ireo fepetra lehibe amin'ny fampandrosoana ny vokatra avo lenta, avo lenta, mahomby, ekolojika ary fiompiana hazan-dranomasina azo antoka.
1. Manaraka ny fitsipiky ny fisorohana aloha ary ny fitsaboana fanampiny. Raha misy ny fepetra fisorohana dia azo fehezina ny aretina fambolena hazan-dranomasina. Ny fanafody trondro dia ampiasaina indrindra ho fanampiana.
2. Misafidiana fanafody trondro nasionaly hisorohana sy hanasitranana ny trondro trondro.
3. Fampiasana siantifika fanafody trondro.
4. Manaraka tsara ny rafitry ny fisintomana.
5. Hatsarao sy tanteraho ny fitsipiky ny fandidiana sy ny fenitry ny famokarana ny fiompiana hazan-dranomasina, mba azo hamarinina sy hajaina ny indostrian'ny fiompiana hazan-dranomasina.
6. Mampiroborobo am-pahavitrihana ny teknika fiompiana momba ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ary ny maodely fiompiana.